May Nyane: ဘုရားသခင်ကို စောင့်နေခဲ့တာကြာပြီ...
ဘုရားသခင်ဆိုတာ လူတွေကဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာ ဆိုရင်တော့ ထိုင်စောင့်နေလို့ မရပေဘူး..
So sorry. Don't know how to mention it. Crush in to pieces.
အန်တီ... အရမ်းကို ခံစားရတယ်။ သမီးကလည်း အဲဒီလိုမျိုး ရေးချင်တာ... ဒါပေမဲ့